[update] Hosamborina tokoa i Andry Rajoelina sy hotsenaina makotroka ny filoha anio | Hevitra MPANOHARIANA
[update] Hosamborina tokoa i Andry Rajoelina sy hotsenaina makotroka ny filoha anio
2009-01-25 @ 08:29 in Politika
Mbola tsy mitsahatry ny hangina ny resaka politika eto Madagasikara. Noho ny fahombiazana azon'i Andry Rajoelina Ben'ny tanànan'Antananarivo tamin'ny fitetezana an'Analakely (moa ve tsy efa torohevitro rahateo izany? vakio ny hevitro tany amin'iray amin'ireo nampidirina faramparany ireo) nandalo an'i Behoririka, Andravoahangy ary nifarana teny Ambodivona misy ny foiben'ny VIVA omaly sabotsy 25 janoary 2009 iny dia hamaly avy hatrany ny filoha Ravalomanana.
Mihamafana ny toe-draharaha ka tsy ho tafatombina any Durban amin'izao hafanana politika izao, noho ny fahazoan'i Andry Rajoelina ny laka noho ny nahazoany mora tsy nisy fanoherana ny kianjan'ny 13 mey, no nampiverina azy haingana hanadinoany ny fihaonana an-tampony izay saiky hatomboka rahampitso, ny filoha Ravalomanana. Tsy maintsy androany tokoa no hanaovana izany fitsenana izany mba tsy hanelingelenana ny tokony hiasan'ny olona rahampitso hanome vahana ny antso fitokonam-be nataon'i Andry TGV manomboka rahampitso. Haingana dia haingana ny vali-bontana, resaka hamaroan'olona izany no ifaninanana amin'izao fotoana izao. Andro saropady ho azy ihany koa satria mba afaka ny mihora-panesoana ihany koa ny mpanohitra azy, saingy samy manana ny toe-tsaina "Ceux qui risquent gagnent" (izay sahy maty mifono lambamena) moa ireto mpifanandrina ireto. Manaraka izany ihany koa dia mbola tsy misy gazety mivoaka androany alahady eto Madagasikara ka tsara ihany koa ny hampifanentana ny hamaroan'ny olona hivoahan'ny sary rahampitso farafaharatsiny. Manahy anefa aho fa hovidian'ny mpanohana ny filoha ny lohateny lehibe rehetra amin'ny gazety raha mbola azony atao izany.
Mampihomehy ihany ny toe-draharaha satria tena fampielezan-kevitra mivantana no tsapa amin'izao ora anoratana izao ao amin'ny MBS radio. Niverina avokoa manko ireo hira nalaza nampiaka-danja ny filoha Ravalomanana hatrizay, indrindra fa ny "samy mafoaka" an'i Jerry Marcos. Tsara ho an'ny filoha aloha izay zava-nitranga rehetra izay ahafahany mamisavisa izay tokony hataony amin'ny manaraka fa tsy mieboebo sy manao izay tiany atao. Hahay hihaino ny olona sy ny fitarainany amin'izay ve izy? Nihomehy ihany aho, fa fony nandalo tany Morondava ny lehilahy dia nilaza hanome vary "hamidy mora"; ny olona anefa zatra omena fotsiny rehefa mihevitra ny tenany ho tra-boina fa tsy mieritreritra ny hividy izany satria tsy manana hosarangotina intsony anie e! Hita hoe mpivarotra mihitsy!
Ho an'izay mbola hanome fitokisana ny filoha Ravalomanana hitondra ny fampandrosoana ary dia amin'ny roa ora folakandro no higadonan'ny filoha eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Handalo an'i Mandrosoa, Talatamaty, Ambohibao, Ambohimanarina, Boulevard de l'Europe (67ha), Andohatapenaka, Ampefiloha, Antaninarenina, Faravohitra ny lehilahy ka entanina ny manodidina ireo lalana ireo hanemitra ny arabe handalovany. Hisy ihany koa ny hafatra hataon'ny filoha any amin'ireo toerana handalovany ireo araka ny voalaza. Moa ve tsy mampahatsiahy ny fotoana niverenan'i Madagasikara ho ao anatin'ny Firaisambe Afrikana izao haverina anio izao? Miaiky aho fa tena mahay ny sehatry ny serasera ny roa tonta aloha!
Etsy ankilan'izany dia miantso ny olona amin'ny fomba ankolaka kosa ny mpanohana an'i Andry TGV fa efa any hoe ny taratasy fampisamborana azy (ny bolongan'i news2dago kosa no nataoko ho loharanom-baovao). Manahy mafy aho fa tetika sy fanodikodinan-doha indray izany resaka izany, araka ny efa nambarako taloha (fakana ny TV VIVA) ihany satria tsy hisy taratasy fampisamborana izany mihitsy atao mandritra ny tany mihotakotaka tahaka izany raha tsy efa voasamboatra aloha ilay olona vao atao ny sonia ka mivoaka ny taratasy, averiko indray fa na dia tsy voalaza ho latsaka an-katerena aza amin'izao fotoana izao ny firenena dia efa arabirabin'ny resaky ny mivonto fo hatrany. Tsy te-hilaza mivantana ry zareo hoe andao isika hifanisa amin'ireo mpanohana an-dravalomanana ireo fa paika hafa nohanaovana azy hanaitra araka izay tratra ny mpanohana azy. Mihahaingana tahaka ny ho vita vetivety kosa izany raharaha izany.
14:00 :Loharanombaovao ambony dia ambony nonandrenesako fa hosamborina tokoa ny Ben'ny tanànan'Antananarivo, Andry Rajoelina. Dia efa miomna ianareoandrimasom-pokonolona ô! HEHEHE!
jentilisa 25 janoary 2009
Misaotra mitatitra vaovao hatrany M. jenttilisa.
Efa dila ny @ 2ora folakandro ka ahoana ny zava-mitranga ao ô?
Mbola tsy nahare vao2 aho fa azoko an-tsaina ny isan'izay hitsena ny filoha ao. Ho kely noho ny voatarik'i Andry aloha e, satria tsy ampy fanentanana ny olona, sady alahady koa ny andro.
Koa amiko dia tsy ampy itarafana ny mbola fanohanana an'dRavalo ny habetsak'izay olona nitsena azy tao.
Toa ahy izao dia tsy manohana an-dRavalo aho, nefa kosa tsy te hiditra amin'ilay sahotaka sy tetezamitan'i Andry. Dia aleoko mijanona an-trano.
Nampidirin'i Korio @ 13:32, 2009-01-25 [Valio]
De tsy mbo leo aviraviran'ny mpanao politika ve isika?
Tena efa mahantra ny firenena ary tsy afenina fa manao ny didy jadona sy mangoro-karena ny fitondrana. Nilaina ny zavatra toy ireny ampatsiaiviny ny mpitondra fa tsy izay tiany no atao, ary ho fampitandremana ny amin'ny sisa(varoboba amin'ny vahiny ny firenena?fanangonana tanin'olona).saingy mbola tsy ampy atsika ve ny vono olona 1991, ny rotaka 2002 no toa mbola miroboka andalambe, mba tena azotsika marina ve ny tanjona sy votoatonizao fihetsiketsehin i andry izao,sy ny olona miafina ambadikizao rehetra izao.Anjaran'ny tsirairay miheritreritra, ary samy mbola ho tsarain'ny tantara. Ra ny tenako manokana de leo ny magouille politique, ary manahy ny ho avin'ny taranako ra sanatry ka pantin ny hitondra ny fireneko.
Nampidirin'i Mijoro @ 15:48, 2009-01-25 [Valio]
vaovao FA tsy speculation sy TSAHO
Misotra ny Jentilisa mampita vao2.
Kanefa kosa, vao2 ihany alefa, zavatra efa niseho, fa tsy honohono sy tsindry mandry.
Aoka aty amy comantera no hisy hoe "hosamborina tokoa izy..." raha misy mahita fa mitombony izany analizy izany.
Ny mpampita vao2, milaza zavatra efa niseho ihany...
Nampidirin'i Ketabozy @ 16:45, 2009-01-25 [Valio]
Zava-dehibe ho anay monina aty ampita tokoa ny mahazo vaovao avy any an-tanána.
Nampidirin'i tian-kavana @ 20:09, 2009-01-25 [Valio]
ny polisy zany efa niverim-potsiny nahita ny hamaroan'ny olona nanao barazy dia ahon ndray hono ny tohiny eeee!!
efa atsy ho atsy ndray zany de hahita olona maro dia maro hamadika palitao hahahahha
Nampidirin'i Papoose @ 21:10, 2009-01-25 [Valio]
bjr,afaka omenao ny vaovao farany any madagascar ve izaho azafady?mb valio.tsara be fa tohizo foana ny fanomezana vaovao e!
Nampidirin'i anja @ 07:06, 2009-03-12 [Valio]
Miezaka ny mampita mandrakariva izahay fa aza manahy ianao
Nampidirin'i jentilisa @ 12:18, 2009-03-12 [Valio]